जसले डोर्‍याए दुई दशकको नेपाली राजनीति | Nagarik News - Nepal Republic Media
गिरिजाको नेतृत्वमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग भएको १२ बुँदे समझदारी, २०६२/२०६३ को जनआन्दोलन, संघीय गणतन्त्र स्थापनाको मुद्दालाई कांग्रेसले आफ्नो ‘क्रेडिट’को रूपमा लिँदै आएको छ। गिरिजाको निधनपछि कांग्रेसमा संयोजनकारी नेताको खाँचो देखिएको छ। उनको अवसानपछि कांग्रेस एकढिक्का हुन सकेको छैन। पार्टीभित्र सधैं विवाद भइरहन्छ। कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस पनि विवादमुक्त भने हुन सकेको थिएन।
गिरिजाले नै नेतृत्व गर्दा शेरबहादुर देउवा (हालका कांग्रेस सभापति)ले पार्टी फुटाएर नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरेका थिए। तर गिरिजाकै नेतृत्व र पहलमा पछि त्यो पार्टी फेरि कांग्रेसमा समाहित भयो। त्यसैले त अहिले कांग्रेसमा गिरिजाको नामले निकै प्राथमिकता पाउँछ। उनको योगदानको चर्चा पार्टीभित्र भइरहन्छ।
तर अहिले पार्टीमा उच्च मनोबल भएको नेतृत्वको खाँचो खड्किएको युवा नेता पौडेल बताउँछन्। ‘अहिलेको नेतृत्व आन्तरिक समस्या समाधान गर्नसमेत सक्दैन। गिरिजाबाबु उच्च मनोबल भएको नेतृत्व हुनुहुन्थ्यो’, उनले भने, ‘त्यो बेला सधैं कांग्रेस नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा हुन्थ्यो तर अहिले निकै कमजोर बनेको छ।’ कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि गिरिजानिकट भएर काम गरे। खासगरी माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन गिरिजाले नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँगै शेखरलाई पनि खटाउने गर्थे।
गिरिजालाई पारिवारिक रूपमा मात्र नभई राजनीतिक रूपमा पनि नजिकबाट चिनेका शेखर नेपाली राजनीतिमा फेरि गिरिजाको अभाव चुलिएको देख्छन्। गिरिजाबिनाको कांग्रेस शिथिल रहेको डा. कोइरालाको बुझाइ छ। ‘गिरिजाबाबुको अभाव कांग्रेसलाई मात्र होइन, देशलाई नै खड्किएको छ। अहिले यो सरकारको अवस्था हेर्दा विकाराल बन्दै गएको छ’, उनले नागरिकसँग भने, ‘देशमा फेरि विप्लवको विषय पनि आएको छ। यसलाई साम्य बनाउन पनि गिरिजाबाबु जस्तो नेतृत्व आवश्यक छ।’
प्रकाशित: ७ चैत्र २०७५ १८:२० बिहीबार
गिरिजाप्रसाद नेपाली_कांग्रेस कार्यकर्तामुखी